Ambatomirahavavy Araha-maso amin’ny « camera de surveillance » ireo fiara mivezivezy
Dimy andro anio alatsinainy sahady no nametrahana ilay « camera de surveillance » any amin’iny lalam-pirenena voalohany iny hahafahana manara-maso ireo fiara mivezivezy eny an-toerana.
Ankoatra ny lanjan’ny fiara dia hita avy hatrany amin’ny alalan’ity « camera » ity ireo entana entiny raha araka ny fanazavana azo, ivontoerana vaovao be eto Madagasikara ary sambany no nametrahana izany eto amintsika. Tanjona ny hahafahana miady amin’ny tsy fandriampahalemana sy ireo karazana kolikoly mety hitranga any amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Vao telo andro monja mantsy dia efa mahatratra 5 tapitrisa Ar ny vola nampidirin’ity ivontoerana ity izay nomarihin’ireo tompon’andraikitra fa tena fahombiazana tokoa. Tonga nijery asa ny governoran’ny Faritra Itasy, notronin’ny mpitandro ny filaminana.